Ny milina shredder tokana tokana dia ampiasaina amin'ny famotehana ny plastika mafy, fantsona, hazo, tabilao elektronika sns. Ny kalitao azonao antoka. Amin'ny maha milina shredder antsika dia nahazo ny governemanta Patent form china isika tamin'ny 2013.
Ny milina mpitrandraka roapolo dia ampiasaina amin'ny famotehana ny plastika malefaka, kitapo tenona, lamba, fako ao an-tanàna, tabilao elektronika sns. Ny kalitao azonao antoka. Amin'ny maha milina shredder antsika dia nahazo ny governemanta Patent form china isika tamin'ny 2013.
Fitaovana flowof milina fanamboarana Pellet: Conveyor → compacteur material (feeder) → Rafitra fanodinana → Die-head sy rafitra haingam-pandeha haingam-pandeha → rafitra pelletizing peratra rano / rafitra pelletizing karazana noodle → milina fanodinam-bidy → sieve vibrant → Air Blower → Hopper fitehirizana